Mexico City nwere ike nwee ụlọ ahịa Apple nke abụọ | Esi m mac
Mexico City nwere ike nwee ụlọ ahịa Apple nke abụọ
Ikpeazụ Septemba anyị kwuru banyere Soy de Mac, the mmeghe nke mbụ Apple Store na Mexico City. O doro anya, Apple nwere obi ụtọ na mmalite nke ya ma na-ezube ịmepe ụlọ ahịa na-ere ahịa ọhụrụ n'ime otu afọ abụọ. Companylọ ọrụ ahụ achịbeghị akara na usoro maka imeghe ụlọ ahịa n'otu oge ma ọ bụ ọnọdụ. Agbanyeghị, ihe ụlọ ọrụ a chọrọ n'ihe gbasara ogige ahụ, yana ọnụahịa ha nwere ike ịrịọ ma ọ bụrụ na onye nwe ya maara na Apple nọ n'azụ itinye ego, kwesịrị ime ka nkwekọrịta ahụ sie ike.
Tụkwasị na nke a, a na-eji ụlọ ọrụ a mara ụlọ ahịa a: aghaghi ibu akara nke okike. Nhọrọ a họọrọ dị ka Storelọ Ahịa Apple na World Trade Center dị na New York, meghere ọnwa ole na ole gara aga, kpọmkwem August gara aga. Companylọ ọrụ ahụ gaara enwe nkwekọrịta na nnukwu ohere na Ebe a na-ere ahịa Antara Fashion Hall. Storelọ ahịa a ga-amụba okpukpu abụọ nke ụlọ ahịa Apple mbụ dị n'obodo ahụ, ọ dịkwa na akụkụ ndị nnọchi anya nke Via Santa Fe Center, nke ndị a ma ama gbara gburugburu. Lọ ahịa ahụ mepere ụzọ ya 10 afọ gara aga ma mara ya na obodo ahụ dị ka akara maka njedebe dị elu na okomoko.
O doro anya na ụlọ ahịa ahụ ga-enwe nnukwu ihe: Somefọdụ ga-emetụta ije dị ka ụlọ elu dị oke elu. Ndị ọzọ na-eji nkà na ụzụ: ọ dị ka ọ ga-egosipụta telivishọn karịrị sentimita 400. Ikekwe nkesa ya nwere ala abụọ, na-ekewa akụkụ azụmahịa site na oghere echekwara maka Genius, ọzụzụ na nrụzi akụrụngwa. A na-ahọrọ nkesa a Apple ma jiri ya na ụlọ ahịa mgbe ọ bụla ọ nwere ike.
Kaosinadị, na amamịghe ụbọchị mmeghe amaghị. O nwere ike ọ gaghị egbu oge, ebe ụlọ ahịa mbụ ejirila ngwa ahịa kachasị mma nke Apple biri n'ime ya, ọrụ ya na ahịa ya. A nụrụ asịrị na ihe Apple ga-eme nwere ike ịbụ mbubata ndị ọzọ na Brazil.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mexico City nwere ike nwee ụlọ ahịa Apple nke abụọ
Apple weputara macOS 10.12.5 beta maka ndị mmepe
Mmelite ohuru nke Telegram maka Mac, mbipute 2.93